Aqalka Sare oo mooshin ka diyaarinaya joogitaanka ciidanka Kenya ee Dalka – Kalfadhi
Aqalka Sare oo mooshin ka diyaarinaya joogitaanka ciidanka Kenya ee Dalka
August 25, 2019 August 25, 2019 Hassan Istiila
Senataro ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe ay mooshin kaga soo gudbinayan joogitaanka ciidamada dowladda Kenya ee gudaha dalka Soomaaliya,sida ay baahisaay warbaahinta maxaliga ah.
Guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha aqalka sare senator Axmed Macalin Cumar oo loo yaqaano Nadiir ayaa u sheegay idaacada Kulmiye in sababta mooshinkan loo diyaarinayo ay la xiriirto weerarkii ay ciidanka Kenya ku burburiyen xarumo ay leedahay shirkad maxali ah.
‘’ Aad baan uga xunahay in ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka Amisom ay miino ku xiran dhismaha shirkad isgaarsiineed oo laga leeyahay Soomaaliya, ‘’ Mooshin looga soo horjeedo joogitaanka ciidanka Kenya ayaan geeyn doonaa golaha marka uu fasaxa ka soo laabto,’’ ayuu yiri senatar Nadiir .
Labada gole ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Soomaaliya ayaa weli fasax ku maqan iyaga oo shaqada dib u billaabi doona dhammaadka bisha sebteembar.
Ciidamada Kenya ayaa hore dhowr jeer loogu eedeyay inay burburiyen taawarada shirkadda Hormuud oo ah tan ugu weyn ee ka shaqeysa isgaarsiinta Soomaaliya.
Maxaa looga hadlay kulankii u dhexeeyay Guddiga KMG ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka iyo axzaabta siyaasadda?
Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo been abuur ku tilmaamay warqadda wasaarada arrimaha gudaha ay ku burisay natiijada doorashada Jubbaland